विश्व नै च’कित पर्ने अ’चम्मको घ’टना घ’ट्यो नेपालमा ? सबै गाउँलेहरु मि’लेर यस्तो सम्म गरे – Filmy News Portal Of Nepal
नेपालमा एउटा उखान खुबै च’र्चामा छ । पै’सा तिर्नु पर्दा अमृ’त पनि नखाने तर निःशुल्क पाए अलकत्रा पनि खा’ने । यस्तै, जी’विको’पार्जनका लागि भन्दै नेपाल रे’डक्र’स सो’साइटीले वितरण गरेको वो’यर बोका गाउँलेले मा’सु खाएका छन् ।
गोरखाको सि’रानचोक गाउँपालिका–३ हर्मीका प्रकाश अधिकारीलाई दिइएको वोयर बोका वुधवार वडाध्यक्षसहित स्थानीयले मिलेर खाएका हुन् । जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल रेडक्र’स सो’साइटी जिल्ला शाखा गोरखाले गत मंसिर ११ गते साविकको हर्मी गाविसका प्रत्येक वडामा एक–एक वटा वो’यर बो’का वि’तरण गरेको थियो ।
तर, अधिकारीले पाएको बोका इलाका प्रहरी कार्यालय हर्मीकै परिसरमा स्थानीयले मासु भाग लगाएका हुन् । वडाध्यक्ष वी’रबहादुर थापाले भने, ‘प्रकाशले गाउँको समूह–फा’इनान्स सबैबाट ऋ’ण लिएको रहेछ । घरमा बुढी आमालाई छाडेर ऋण तिर्न नसकेर भा’गेछ, अनि गाउँलेले घरमा पालेको सबै गाईवस्तु लिला’मी गरे र त्यही बो’का पनि लगेर का’टेका हुन् ।’
उक्त बोका काट्दा १४ हजार रुपैयाँ उठेको उनले बताए । संकलित रकमको केही अंश अधिकारीको आमालाई दिने उनले स्प’ष्ट पारेका छन् । सबैसँग सल्लाह गरेर बो’का काटेर मासु बे’चेको उनले जानकारी गराए ।
जीविकोपार्जनका लागि दिएको बोका का’टेर मासु खाएपछि रे’डक्रसले आ’पत्ति जनाएको छ । उक्त बोकाको ३० हजार रकम बराबरको बि’मा समेत गरिएको उनले बताए ।
ढाका कपडा बुनेर स्वरोजगार बन्दै यी नानीहरु ! दु:ख गरे मनग्य आम्दानी हुने (हेर्नुस् भिडियो)
अब लक्षित वर्गलाई मात्र कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार